Ogaden News Agency (ONA) – Bayaan Kasoo Baxay EU oo Wayaanaha Lagu Dhaliilay.
Bayaan Kasoo Baxay EU oo Wayaanaha Lagu Dhaliilay.
Posted by Dulmane	/ December 21, 2017
Bayaan kasoo baxay Ururka Midowga Yurub EU ayaa siwayn loogu dhaliilay siyaasadaha is khilaafsan ee taliska wayaanaha iyo guud ahaan khal Khalka kajira wadanka gumaysiga Itoobiya.
Bayaanka kasoo baxay Midowga Yurub ayaa siwayn loogaga hadlay khal khalka siyaasadeed ee wadanka kajira, wuxuuna ururku katalo bixiyay sidoo looga bixi lahaa siyaasada murugsan ee wadanka kataagan mudada dheer, iyo is afgaran waaga kajira qoomiyadaha dhex dooda.
Sidoo kale bayaanka Midowga Yurub ayaa siwayn loogu cambaareeyay xasuuqa joogtada ah ee lagu hayo shucuubta kala duwan ee Itoobiya, waxaana bayaanka siwayn loogaga hadlay xasuuqa ay qoomiyada Oromadu ugaysatay shacabka Soomaalida ah ee kudhaqan deegaanadeeda.
Sidoo kale hadalka kasoo yeedhay Ururka Midowga Yurub ayaa siwayn loogu dhaliilay wax qabad la’aanta taliska wayaanaha ee ku aadan colaadaha u dhaxeeya qoomiyadaha iyo waliba doorka ay hurinta dagaaladaas ku leeyihiin saraakiisha wayaanuhu.
Sidoo kale Midowga Yurub ayaa baaq udiray dhamaan qaybaha kala duwan ee colaadu ay kadhaxayso iyo maamulada kajira dhulka ay colaadu ka aloogan tahay, waxaana bayaanka loogu baaqay xukuumada wayaanuhu ay in dagaalada wax kaqabato.
Hadalka kasoo yeedhay Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in xalka lagu gaadhi karo xeerka wadanka Itoobiya oo sida uu yahay loogu dhaqmo iyo talaabo laga qaado dambiile yaasha xasuuqa dadka shacabka ah.
Ugu dambayntii bayaanka kasoo baxay Midowga Yurub EU ayaa tacsi loogu diray dadkii ehelkooda lagu xasuuqay Gobolka Oromia, iyo guud ahaan shacabka ree Itoobiya oo dhibaatooyin kala duwan qaba.